Luis de Góngora, mukuru mukurumbira weSpanish culteranismo | Zvazvino Zvinyorwa
Mutsara naLuis de Góngora.
Luis de Góngora (1561 - 1627) aive mudetembi ane mukurumbira uye mutambi wemitambo, pamwe nemumwe wevamiriri vakakosha veSpanish Golden Age. Nhasi anozivikanwa semukurudziri mukurusa wecitteranismo, zvinyorwa zvemazuva ano izvo zvinodaidzwa kunzi gongorism. Basa rake renhetembo rinozivikanwa nekutya uye panguva imwechete nyika.
Saizvozvowo, mutauro wake unofungidzirwa seimwe yemabhakoni akajeka mukushanduka kwazvino "nhetembo dzinotaura chiSpanish". Saka, basa rake rakaverengerwa se "zviso zviviri zvegirazi rimwe chete", uko chiedza nerima zvine mavambo akafanana muzvinyorwa zvavo zvakasiyana.
1 Luis de Góngora: hupenyu pakati petsamba
1.1 Makore ekutanga akaratidzirwa netsika yakasimba yechiKaturike
1.2 Ruvengo naQuevedo
1.3 Kunaka kwenhetembo dzake
1.4 "Major uye" madiki "anoshanda
1.5 Zvinyorwa zveLuis de Góngora
1.6 Pakati pematete nemanyoneti
1.7 The Solitudes
2 Kupera kwenyaya, kutanga kwendangariro
2.1 Nhaka "yakachengetedzwa nemhandu"
2.2 Zvakakodzera kutaura
Luis de Góngora: hupenyu pakati petsamba
Luis de Góngora y Argote akaberekwa musi waChikunguru 11, 1561, kuCalle de las Pavas muCórdoba, Andalusia. Akanga ari chikamu cheimwe yemhuri dzakapfuma uye dzakachengetedza nguva yenguva pamahombekombe eGuadalquivir, kutaura zvazviri, baba vake vaive mutongi wepfuma akatorerwa Hofisi Tsvene.
Makore ekutanga akaratidzirwa netsika yakasimba yechiKaturike
Wechidiki Luis akafanirwa kutora madhiragi madiki kudzamara asvika padanho rekanoni yekereke huru yedhorobha rake. Zvakare, Akawana mukurumbira mukuru nekutora chinzvimbo cheRoyal Chaplain muna 1617 panguva yekurairwa kwaFelipe III. Izvo, zvakamutungamira kuti ararame kusvika 1626 mudare reMadrid kuti akwanise kushandisa zviitwa zvinechekuita nezita rake.
Gare gare, akafamba mumakomisheni akasiyana ekanzuru yake mukati meinenge Spain yese. Iye anotora mukana weidzi nzendo kuti agare achipfuura nekukwaakaberekerwa Andalusia. Nenzira imwecheteyo, akashinga kushanyira Jaén, Navarra, Castilla, Cuenca, Salamanca uye akawanda maokoki nemakorona enharaunda yazvino yeMadrid.
Chimwe chezvitsauko zvakataurwa zvakanyanya nezve hupenyu hwanyanduri uyu uye munyori wemitambo yaive ruvengo naye Francisco de Quevedo. Sekureva kwaGóngora, "waaishanda naye" kwenguva (pavakasangana kuDare reValladolid) akazvipira kuti amuteedzere. Zvakare, Luis de Góngora akasvika pakusimbisa kuti haana kana kuzviita pachena, asi kuburikidza nezita rekunyepedzera.
Kunaka kwenhetembo dzake
Mamwe emabasa ake anoonekwa pakati peanonyanya kumiririra nhetembo dzeSpanish. Uku nekutenda kune kuomarara kwavanozvivharira mukati mavo Kusurukirwa y Iyo ngano yePolyphemus neGalatea. Zvese zviri zviviri zvinokonzeresa kukakavara munguva yavo - kwete chete nekuda kweakatanga madimikira avo akavezwa - kunyanya nekuda kwekutaura kwavo kwakashata, kwekusvora uye kwekusvora.
Naizvozvo, Rwake rwusingafadze satirical streak yaigara iripo mune zvese zvinyorwa zvake. Achimuperekedza kubva kumaronda ekutanga akadai sekunyorwa kwenhetembo dzakakumikidzwa kuguva raEl Greco, Rodrigo Calderón uye Ngano yePíramo naIbebe. Uye zvakare, yake nhetembo zvisikwa zvinomira kunze kune hunhu hwataurwa pazasi:
Kugara uchishandisa isinganzwisisike baroque hyperbole.
Kakawanda kushandiswa kwehyperbatones ine zvakafanana zviitiko.
Mutauro wakanyanya kutorwa.
"Major uye" madiki "anoshanda
Basa rake renhetembo rakakamurwa muzvikamu zviviri: nhetembo huru uye nhetembo diki. Pakati pavo, kudanana kwakawanda senge kwe Angelica naMedoro, ane misikanzwa, ine rwiyo uye kunyangwe matauriro emunhu ano nyora anonyura mukati meichi chinozivikanwa chinyorwa chekufemerwa.
Zvinyorwa zveLuis de Góngora
Luis de Góngora haana kumboburitsa chero emabasa ake munguva yehupenyu hwake; aingova manyoro chete akapfuudzwa kubva paruoko kuenda kune rumwe. Izvo zvaisanganisira mabhuku enziyo, mabhuku erudo uye kunyangwe anthologies, kazhinji yakaburitswa pasina mvumo yake. Pane imwe nguva - muna 1623 - akaedza kutsikisa zviri pamutemo chikamu chebasa rake, asi akarega kuedza.
Rumwe rwemavara aakapa mvumo yekuparadzira kwaive kufona Chacón chinyorwa, yakanyorwa naAntonio Chacón weCount-Duke weOlivares. Ikoko, kujekeswa neruoko rwaGóngora pachake kwakabatanidzwa pamwe chete nekuverengwa kwenguva kweimwe yenhetembo.
Pakati pematete nemanyoneti
Uyezve, Góngora aive akatendeka kuburitsa pachena satirical, zvechitendero uye nerwiyo mazwi, zvakare manoneti nekubata burlesque. Masitayera ekupedzisira akanyatsovhengana nharo, nyaya dzerudo, uye hurukuro dzefilosofi kana dzehunhu. Vamwe vaive nemabiko ekukurudzira, asi kazhinji vasingaregedze satire.
Kunyangwe zvataurwa pamusoro apa, kutsvaga kwemhando yepamusoro maitiro kwakange kuri chimwe chezvinhu zvaainetseka nazvo. Nechinangwa chevakawanda vetsamba yaive yekuseka avo vanonzi vanokumbira vakadzi. Kunze kwekurwisa kusuwa kwakadzama kweiko kusingakwanisike kana kuda kuwana hupfumi hwakawandisa. Kusiyana nenhetembo dzekare, dzaive nechinangwa chekusimudzira chimurenga.
Unogona kutenga bhuku pano: Solitudes
Iri ndiro pamwe basa rekufungidzira mukatalog yaro. ari kusurukirwa zvinonetsa kuhuchenjeri hwevanhu, chikonzero chekupokana kusingaverengeki panguva iyoyo. Zviri mukati maro zvinopa kurongeka kwekufunga kwechisikigo, tichifungidzira iro basa rinomiririra kumagumo eiyo "gongoresque" maitiro.
Ukuwo, kwake kwekushinga "kushinga" ndiko kwakakonzera kunyongana kukuru nekuda kwehunhu hwake semurume "ane hutsinye". Uye zvakare, iyo gakava rakasimudzwa nekumashure kwechinyorwa chengochani. Ndokureva, zvakare munyori weAndalusian akasundira magariro emagariro enguva yake kusvika pamugumo.
Kupera kwenyaya, kutanga kwendangariro
Mazuva ekupedzisira aLuis de Góngora haana kukudza hupenyu hwemurume uyo - chete nemanyoro - ane simba rakakura pamavara echiCastilian. Zvinokonzera: makaro evamwe vemhuri yake uye matambudziko ekushaya simba akabatana zvisina tsitsi akamusiya anyura munhamo.
Nhaka "yakachengetedzwa nemhandu"
Basa rake, risina kupera muzviitiko zvakawanda uye risina kuburitswa, raive munjodzi chaiyo yekurasika munzvimbo dzekukanganwa. Zvinotoshamisa kuti kuramba kurwa naQuevedo pakutanga kwakaita kuti zvikwanise kununura uye kuchengetedza nhaka yake. Nekuda kweiyi "kukakavara" pakanga paine yakawanda yakanyorwa mapepa akasiirwa ramangwana.
"Hondo yesatires" yakaburitswa pakati pevaviri yakashanda kuratidza murume anofara uye anoda hupenyu hwakanaka. Pamusoro pe, Luis de Góngora anorondedzerwa semunhu anoshingairira kuda zvekurwa nemombe uye kutamba makadhi. Wekupedzisira akamupa kusatenderwa nemazano ake ekutanga, vakuru vechechi.
Parizvino, nhetembo dzake nebasa rake rekunyora zvese - kusanganisira kuiswa kwavo mumutambo - zvinozivikanwa nekukosha kwavo kwakakodzera. Y, Kunyangwe munyori aisakwanisa kumuona muhupenyu, zvinyorwa zvake zvinoburitswa nehukuru hwakawanda. Sezvazvinofanira kuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Luis de Gongora